Somaliland.Org » Boorama: Baahiyaha taagan iyo ballan-qaad aan dhammaan
Boorama: Baahiyaha taagan iyo ballan-qaad aan dhammaan
October 30th, 2009 Comments Off Waa masaafo Hargeysa u jirta ilaa 120-km, balse waxay la socdaal iyo sahayba tahay 300-km. Waxa caadiyan Hargeysa ay u jirtaa oo looga socdaali lahaa muddo saacad iyo badh ah, hase yeeshee waxa hadda socdaalkeedu qaataa saddex saacadood. Duruuftaa qasbaysa in aad jiho kale u marto, halka yoolkaagu yahay inaad gaadho, waana daruuri baydh-baydhka iyo in bar kale la maraa.
Inkasta oo busku dedan yahay, haddana waa lama-huraan in lala kulmo boodh, maadaama oo marinku carro iyo Ciid yahay. Jidku waa ka isku xidha Magaalooyinka Borama iyo Hargeysa. Waxa Laami dhisan lagaga baxaa oo duruufaha kor ku xusani waajahaan Gaadiid iyo dad labadaba marka, Tuulada Kala-baydh ee galbeedka Hargeysa looga gudbo dhinaca Borama. Hase ahaatee, waddada xidhiidhisa Degmada Dila iyo Magaalada Borama oo masaafo ahaan gaadhaysa ilaa dhawr iyo labaatan Kilo-meter, waa meesha ugu rafaadka badan Gaadiidka. Sababtoo ah, gebi ahaanba ma jiro Laami dhisan. Taa bedelkeedana Gaadiidku waxay isticmaalaan Jid-cadde ay dhib ka mutaan. “Xukuumadda iyo Madaxda Somaliland way maraan oo way ka war-qabaan burburka Jidkan iyo waddo-la’aanta Dariiqa isku xidha Hargeysa iyo Borama. Hase ahaatee, ma garan karo sababta wax looga qaban waayay. Anagana dhib wayn ayay nagu haysaa, Ilaahay amarkiisa ka sokowna, burburka Jidku badi waa sababta keenta in Gaadiidku rogmado ama dhaco.” Ereyadaasi waxay ka mid ahaayeen weedho uu ku tiraabay mid ka mid ah Gaadiidleyda isaga kala goosha Borama iyo Hargeysa oo ka hadlayay dhibta burburka Jidkani ku hayo.
Borama, Xarunta Gobolka Awdal, Jidadkeedu waxa uu u badan yahay Carro iyo Ciid cad, marka laga reebo Jid Laami ah oo uu dhisay Maayarka hadda. Inkasta oo aan isku dayay in aan arrimahan wax ka waydiiyo Maayarka, haddana iima suurtogelin.
Xarunta Gobolka Awdal waa Magaalo ka ag-dhaw Xuduudka Somaliland iyo Itoobiya, isla markaana waxa ka socda Ganacsi badankiisu ka yimaaddo Magaalooyinka kale ee dalka. Inkasta oo Ganacsigaasi socdo, haddana waxay gobollada kale ee dalka kala siman yihiin shaqo-la’aanta iyo baahiyaha joogtada ah ee la soo dersa Bulshada. “Waxaanu aragnaa Arday doonaya Jaamacadda in uu galo, balse marka u